Anal and intestine h - Engels - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: anal and intestine health care nutrient (Engels - Burmees)
ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် လူနာများကို ထိတွေ့ကုသစဉ် မျက်နှာကာအကြည်များ သို့မဟုတ် မျက်မှန်များ တပ်ဆင်သင့်သည်။
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဝန်ထမ်းများသည် ဝန်ထမ်းများအကြားနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်းကျင်အတွင်း အနာရောဂါများဖြင့် စုပြုံဝန်းရံနေခြင်းကြောင့် အခြားသူများနှင့်ယှဉ်လျှင် ကူးစက်နိုင်ခြေ ပိုမိုမြင့်မားနေသည်။
In addition to masks, health-care providers should wear fitted isolation gowns in order to further reduce contact with viruses.
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအနေဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ထိတွေ့မှုကို ထပ်မံလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် နှာခေါင်းစည်းများအပြင် အံကိုက်ဖြစ်သော အကာအကွယ်ဝတ်စုံများကို ဝတ်ဆင်သင့်သည်။
အမျိုးသမီးများသည် မကြာခဏပင် ကျန်းမာရေး လုပ်သားများ၏ ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး မကြာခဏပင် ကျောင်းပိတ်ခြင်းများမှ ရလာဒ်ကြောင့် ကလေးစောင့်ရှောက်မှု တာဝန်များကြောင့် အလုပ်သို့ မသွားနိုင်ပဲ ရှိသည်။
A recent study on 138 cases reported that 41% of the cases were possibly caused by nosocomial infections, including 17 patients with other prior diseases and 40 health-care providers.
အခြားရောဂါအခံရှိသူ 17 ဦးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ 40 ဦးတို့အပါအဝင် ကူးစက်မှု 138 ခုကို မကြာသေးမီက လေ့လာခဲ့မှုအရ 41% သော ကူးစက်မှုများသည် ဆေးရုံမှ ကူးစက်ခံရခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
On January 20, the infection of health-care providers was reported, suggesting that human-to-human transmission was possible.
ဇန်နဝါရီ 20 တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသို့ ရောဂါကူးစက်မှု ရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ ကူးစက်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့သည်။
Therefore, buildingaprognosis model for the disease is essential for health-care agencies to prioritize their services, especially in resource-constrained areas.
ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အေဂျင်စီများသည် အထူးသဖြင့် အရင်းအမြစ် အကန့်အသတ်ရှိသည့် ဒေသများတွင် ကုသမှုများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရောဂါ အခြေအနေ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် ပုံစံငယ်တစ်ခုကို မဖြစ်မနေ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Thus, mental health care should be provided to COVID-19 patients, suspected individuals, and people in contact with them as well as the general public who are in need.
ထို့ကြောင့် COVID-19 လူနာများ၊ ရောဂါသံသယရှိသူများ၊ ၎င်းတို့နှင့်ထိတွေ့မှုရှိသူများအပြင် အကူအညီ လိုအပ်နေသည့် ပြည်သူလူထုအတွက် စိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသင့်သည်။
ကိုယ်ပူခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှူရခက်ခြင်း အပါအဝင် COVID-19 လက္ခဏာများခံစားနေရသည့်၊‌ရောဂါအခံရှိသူများသည် ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ရပါမည်။
2012 ဒိန်းမတ် လေ့လာမှုအရ အလွန်အကျွံ လက်ဆေးခြင်းက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ထမ်းများတွင် အဖြစ်များသည့် ယားယံခြင်း၊ နှင်းခူ သို့မဟုတ် လက်ရောင်အန်းနာကျင်ခြင်းဟု သိကြသည့် အရေပြားအလွှာလိုက်ကွာကျခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သိခဲ့ရပါသည်။
Thus, great precaution should be used to protect humans, especially health-care providers, social workers, family members, colleagues, and even bystanders in contact with patients or infected people.
ထို့ကြောင့် လူသားများ၊ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ၊ လူမှုဝန်ထမ်းများ၊ မိသားစုဝင်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် လူနာများ သို့မဟုတ် ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူများနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူများကိုပင် ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အထူးကောင်းမွန်သော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကို အသုံးပြုသင့်သည်။
Since particles can penetrate even five surgical masks stacked together, health-care providers in direct contact with patients must wear N95 (series # 1860s) masks but not surgical masks.
အမှုန်လေးများသည် အတူတူ တွဲချုပ်ထားသော ခွဲစိတ်ခန်းသုံး နှာခေါင်းစည်း ငါးခုကိုပင်လျှင် ဖောက်ထွက်နိုင်သဖြင့် လူနာနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ခွဲစိတ်ခန်းသုံး နှာခေါင်းစည်းများကို အသုံးမပြုဘဲ N95 (စီးရီး # 1860 များ) နှာခေါင်းစည်းများကို ဝတ်ဆင်အသုံးပြုရမည်။
&quot; The &quot;&quot;Essential Health Care Program&quot;&quot; implemented by the Department of Education in the Philippines is an example of at scale action to promote children's health and education. &quot;
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ပညာရေး ဌာနက အကောင်အထည်ဖော်သော “မရှိမဖြစ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်” သည် ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကို မြင့်တင်သည့် ကြီးမားသော လုပ်ဆောင်မှု နမူနာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
COVID-19 ကြောင့် ကျောင်းများပိတ်လိုက်ရခြင်းသည် ကျောင်းသားများ၏ ကြွေးမြီ၊ ဒီဂျစ်တယ်သင်ကြားမှုနည်းစနစ်၊ စားနပ်ရက္ခာ မလုံလောက်မှုနှင့် အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခြင်းများအား ပေါ်ပေါက်စေပြီး ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းချထားခြင်း၊ အင်တာနက်နှင့် မသန်မစွမ်းသူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်စေခြင်းတို့ အပါအဝင် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေခဲ့သည်။
&quot; The purpose of hand-washing in the health-care setting is to remove pathogenic microorganisms (&quot;&quot;germs&quot;&quot;) and avoid transmitting them. &quot;
&quot;ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အလုပ်ရုံတွင် လက်ဆေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရောဂါဖြစ်စေသော အနုဇီဝသက်ရှိများ (&quot;&quot;ရောဂါပိုးမွှားများ&quot;&quot;) ကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် ၎င်းတို့ ကူးစက်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ရန် ဖြစ်သည်။&quot;
Iran's President Hassan Rouhani wroteapublic letter to world leaders asking for help on 14 March 2020, saying that his country is struggling to fight the outbreak due to lack of access to international markets asaresult of the United States sanctions against Iran.The outbreak has prompted calls for the United States to adopt social policies common in other wealthy countries, including universal health care, universal child care, paid family leave, and higher levels of funding for public health.
အီရန် သမ္မတ ဟာဆန်ရိုဟီနီက လူထုပေးစာတစ်စောင်ကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များထံ ပေးပို့ပြီး 2020 ခုနှစ် မတ်လ 14 ရက်နေ့တွင် အကူအညီတောင်းခံလိုက်သည်။ စာထဲတွင် သူ၏ နိုင်ငံသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အီရန်နိုင်ငံကို အရေးယူပိတ်ဆို့ ထားမှုများ၏ ရလာဒ်ကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်များကို လက်လှမ်းမီမှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို တိုက်ခိုက်ရန် ရုန်းကန်နေရသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အခြားသော ချမ်းသာသည့် နိုင်ငံများနှင့် အလားတူ အားလုံးကို လွှမ်းခြုံသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ အားလုံးကို လွှမ်းခြုံသော ကလေး စောင့်ရှောက်မှု၊ မိသားစု လစာဖြင့် ခွင့်၊ နှင့် လူထု ကျန်းမာရေးအတါက် ပိုမိုမြင့်မားသော ရံပုံငွေ အတိုင်းအတာ တို့ အပါအဝင် လူမှု မူဝါဒများကို လက်ခံလာရန် တောင်းဆိုမှုများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သင့်လျော်သောလက်ဆေးခြင်းနှင့် အခြားသော ရိုးရှင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကတ်သီတာနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် သွေးတွင်းကူးစက်မှုနှုန်းကို 66 ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချနိုင်သည်ဟု လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ပြသခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍများတွင် စံနှုန်းမီသော လက်ဆေးခြင်းနှင့် လက်ကိုပွတ်ခြင်းတို့အား သရုပ်ပြထားသည့်စာရွက်ကို ဖြန့်ဝေထားပါသည်။
prudence (Frans>Swahili)aegre fero (Latijn>Engels)홍길동 (Koreaans>Engels)æ•…éšœ (Japans>Engels)kartavya make sentence in kannada (Kannada>Engels)ti amo bambino (Italiaans>Engels)tota pulchra es amica mea (Latijn>Tjechisch)what about you? (Engels>Hindi)らえないかと (Japans>Engels)спондилит (Russisch>Engels)anya hasha mika (Koreaans>Engels)bonum animam viventem (Latijn>Engels)spikespen japanese mother son (Engels>Duits)danke süße (Duits>Engels)노무 보고시퍼서 (Koreaans>Engels)owari da na (Japans>Engels)décider (Frans>Latijn)omoshiroi desu (Japans>Engels)kulthi dal meaning in bengali (Hindi>Engels)mammographie (Duits>Frans)christie (Spaans>Frans)neomu shiro (Koreaans>Engels)what is shebal (Koreaans>Tagalog)audemus (Latijn>Engels)cynep (Russisch>Engels)